Iphaneli elenziwe ngokhuni elenzelwe, ikakhulukazi elifanele ukusetshenziswa embonini yezokwakha ngezinhloso zokwakha noma ezingezona ezokwakha.
I-ROCPLEX Packing Plywood iyi-plywood yokupakisha enekhwalithi ephezulu nokusebenziseka kwayo, isetshenziselwa kabanzi i-pallet, ibhokisi lokupakisha, ukwakha udonga, njll.
I-ROCPLEX Ukusebenza okuphezulu okunye okusimeme kunamapulangwe, imishayo ye-ROCPLEX's Laminated Veneer Lumber (LVL), izihloko namakholomu kusetshenziswa ezinhlelweni zokwakha ukuthwala imithwalo esindayo enesisindo esincane.
I-ROCPLEX HPL yizinto zokwakha ezingangenisi umlilo zokuhlobisa indawo, ezenziwe ngephepha le-kraft ngaphansi kwenqubo yokufaka i-melamine ne-phenolic resin. Izinto zenziwa ukushisa okuphezulu nokucindezela.
I-ROCPLEX Film Faced Plywood iyipulangwe elenziwe ngokhuni oluqinile elimbozwe ngefilimu ephathwe ngenhlaka ephenduka ifilimu evikelayo ngesikhathi sokukhiqiza.
Izikhumba zeminyango ye-ROCPLEX enamabhangqa angaba ngu-80 wesitayela sesikhunta esinaso, singawanelisa cishe zonke izicelo zamakhasimende maqondana nezinhlobo ezijwayelekile zezinkuni nokufaka imibala ngokwezifiso zezikhumba zethu ze-ROCPLEX® Door.
I-ROCPLEX Pine plywood imvamisa ingumkhiqizo wekhwalithi ephezulu oza ngamapaneli ebanga lasolwandle anezinhlangothi ezimbili ezinhlangothini ezisuka ku-⅛ ”kuye ku-1 ″.
IRocplex Antislip Ifilimu Elibhekiswe KuPlywood
I-ROCPLEX antislip plywood iyipulangwe eliqinile le-100% le-birch eliboshwe ngokhuni oluqinile, olumelana nokushelela futhi olunzima lokugqoka i-phenolic film coating.